Sharciga Cusub Ee Champions League Soo Saaray Oo Ka Farxiyey Man United Halka Kooxahan Ay Murugo Galeen? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kadib kulankii ay yeesheen xubnaha golaha fulinta UEFA waxaa ka soo baxay war saxaafadeed ay qayb ka mid ahi jaho wareer keentay isla markaana ayna taageerayaashu si fiican u fahmin.
Go’aanka UEFA ayaa ahaa mid saamayn wayn yeelanaya isla markaana maamulka horyaalada loo gacan galiyay xidhiidhada kubbada cagta ee wadan kasta oo Yurub ah taas oo keentay xaalado fahan la’aan ah.
Saddex arimood ayaa ugu muhiimsan oo ay tahay in aad fahanto marka laga hadlayo go’aankii golaha fulinta ee UEFA kaga hadleen waxa laga yeelayo horyaalada Yurub iyo qaabka loogu soo baxayo Champions league iyo Europa league.
Haddaba halkan kaga bogo xogta oo si faahfaahsan u qoran.
1- Marka kowaad waxay UEFA dhiiro galisay in wax walba loo sameeyo in horyaalada la dhamaystiro iyada oo garoomada oo madhan lagu ciyaarayo.
2- Haddii ay suurtogal noqon waydo in la dhamaystiro xili ciyaareedka horyaalada Yurub, waxay UEFA u dajisay qaacido uu wadan kastaaba raaci doono si loo ogaado kooxaha ugu soo bixi doona Champions League iyo Europa league.
3- Waxaa lagu waajibiyay xidhiidhada kubbada cagta dalalka Yurub in haddii horyaaladu dhamaystirmi waayaan in ay raacaan laba arimood, oo kala ah in kooxaha loo sameeyo cadaalad isla markaana ayna muuqan cadaalad daro ay dad waynuhu dareemi karaan.
4- Cadaalad ugu wayn waxaa loo arkay in haddii horyaaladu dhamaystirmi waayaan in kooxaha u soo baxaya Champions League iyo Europa league lagu go’aamiyo celcelis ahaan koox kastaaba dhibcihii ay kulamada ka soo heshay intii la soo ciyaaray.
Haddii aan qodobkan afraad sii sharaxno waxaa laysku qaybinayaa dhibcaha ay koox kastaaba ka soo heshay kulamadii horyaalka ee ay soo ciyaartay iyo tirada kulamadii ay ciyaartay.
Tusaale ahaan haddii Liverpool oo hogaanka Premier league haysaa ay soo ciyaartay 29 kulan oo ay ka soo heshay 82 dhibcood waxaa dhibcihii ay kulankiiba ka soo heshay lagu soo saarayaa 82/29 oo la mid ah 2.83 dhibcood kulankiiba.
Sidaa daraadeed, kooxaha kaalmaha kowaad kaga jira horyaalada Yurub waxaa si rasmi ah loogu aqoonsan doonaan kooxaha ku guulaystay koobabka ee kaalinta kowaad ee Champions League ku soo baxaya haddii horyaaladu dhamaystirmi waayaan.
Haddaba iyada oo la ogaa murankii ka dhashay warkan, waxaanu si gaar ah u eegaynaa horyaalka Premier leauge ee kooxaha Champions League u soo baxaya iyo kuwa Europa League u soo gudbi doona haddii qaacidan UEFA soo saarta la raaco oo xili ciyaareedku uu dhamaystirmi waayo.
Marka kowaad Liverpool waxay si rasmi ah u noqon doontaa kooxda koobka Premier league loo caleemo saari doono maadaama oo ay noqotay kooxda kaalinta kowaad ku gashay sharciga UEFA soo saartay ee dhibcaha kulankiiba laga soo helay.
Liverpool ayaa sida aad tusaale hore ku aragtay kulankiiba ka soo heshay 2.83, waxaana kaalinta labaad ee Premier League sharcigan ku soo gashay Manchester City oo celcelis ahaan kulankiiba xili ciyaareedkan soo heshay 2.04 dhibcood laakiin maadaama oo laga ganaaxay Champions league waxaa faa’iido ku qabtay koox wayn oo kale.
Leicester City ayaa noqon doonta kooxda labaad ee Champions League ugu soo bixi doonta in ay kulankiiba xili ciyaareedkan ka soo heshay 1.83 dhicbood waxaana kaalinta saddexaad ku jirta Chelsea oo kulankiiba ka soo heshay 1.66 dhibcood wuxuuna sharcigan Blues ka badbaadiyay qiimaynta UEFA ee markii hore la filayay in kooxaha lagu kala saaro.
UEFA ayaa si rasmi ah meesha uga saartay in kooxaha horyaalada lagu kala saari doono qiimaynteeda Champions League maadaama oo ay qiimayntaasi ku salaysan tahay natiijooyinka shantii sanadood ee ugu danbeeyay, waxayna Chelea heshay qorshe sax ah oo ay kaga badbaaday naxdintii hore u soo baxday.
Manchester United ayaa kaalinta afraad ee Champions League ku soo bixi doonta haddii xili ciyaareedka la dhamaystiri waayo iyada oo wadno xanuun ku abuurtay kooxda layaabka soo dhigtay ee Sheffield United.
Man United ayaa kulankiiba xili ciyaareedkan waxay celcelis ahaan ka soo heshay 1.55 dhibcood halka kooxda ka Sheffield United ay kulankiiba ka soo heshay 1.54 dhibcood waana arin murugo wayn ku noqon doonta kooxda haddii xili ciyaareedka la dhamaystiri waayo oo sharcigan la raaco ay UEFA soo saartay.
Laakiin Sheffield United, Arsenal iyo Wolves ayaa noqon doona saddexda kooxood ee Europa League u soo baxaya haddii sharcigan cusub ee ay UEFA soo saartay la raaco halka Tottenham ay seegi doonto tartamada Yurub maadaama oo ay hooseeyaan celcelis ahaan kulankiiba dhibcihii ay ka soo heshay.
Haddaba halkan kaga bogo Kala Saraynta kooxaha Premier League marka la raaco sharciga UEFA soo saartay haddii xili ciyaareedku dhamaystirmi waayo ee celcelis ahaan koox kastaaba dhibcihii ay kulankiiba ka soo heshay.
Kooxaha Norwich City, Aston Villa iyo Bournemouth ayaa noqon doona saddexda kooxood ee lagu celin doono horyaalka heerka labaad haddii sharcigan UEFA la raaco.
War Deg Deg ah Oo Ka Soo Kordhay Tartankii La Farax Walaalkaa?
Waa Maxay Go’aanka Midaysan Ee 20-Kooxood Ee Horyaalka PL Ka Soo Wada Saareen Baaqyada Dhanka Dhaqaalaha Ee Waaxda NHS?
Bandhige:- Kumuu Ahaa Mukhtaar Cuti?